Telecommunications Station Anundgård tọrọ ala – N'ileghachi anya azụ na narị afọ ndị gara | Holmbygden.se
Ihe na 16 February, 2017 site Holmbygden.se
Anund Manor ẹdude ekwentị exchange
Telecommunications Station Anundgård ugbu a nwere a "kasị mma tupu ụbọchị". Dị ka akụkụ nke phasing si ọla kọpa netwọk gafee mba ugbu a Telia kpebiri ịkpọrọ ọdụ nke ọrụ mgbe 100 afọ na-arụsi ọrụ ike ọrụ. The mmechi-emetụta ihe nile debanyere aha ndị nwere a home telephony ndebanye aha via ekwentị Jack, ma Telia ma ọ bụ ọzọ ọrụ.
afọ 2012 a mara ọkwa na Telia ga tinyere ala ekwentị ebe ke Loviken. Ugbu a bụ telekomunikashions ebe i Anundgård nke ahụ hụrụ ya kacha mma ụbọchị. Dị ka ndị ọzọ nhọrọ maka nkwurịta okwu karịa site ochie ọla kọpa network adia ọzọ-na-ọzọ ka na-Telia Group ruo afọ ụfọdụ ugbu a na usoro nke na dismantling niile ochie ekwentị mgbanwe na-agaghịkwa atụle uru. Anundgård The ojii ga-emechi maka ezi 2018-04-03.
ọhụrụ nhọrọ, tinyere Holm Fiber
N'ihi na ndị na ugbu a nwere a home ekwentị site na ọla kọpa na netwọk na ị chọrọ ịnọgide na dị iche iche nhọrọ. Ọ bụrụ na ị na-aga na-na eriri arụnyere na site "Holm Fiber" (Obs! Report ebe a!) otú i nwere ike iji nke ọ bụla ọrụ na-na-ahọrọ Servanet (ga-ewuru eriri network ọnụ na Holm Fiber).
Onye ọzọ na-enwe n'ụlọ telephony n'elu eriri, ya “home telephony site na mobile netwọk”. On ya website, Telia n'aka ozi izugbe na ajụjụ na azịza ọmụmaatụ mmechi ("Future Networks") na ha onwe ha amụọ ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-anọ (ma ọ bụ banye) Telia.
ma, telecom advisors a ụgbọelu-anọpụ iche ahịa ọrụ nke pụrụ inye aka idozi ihe na ihe i kwesịrị ịtụle tupu ịzụrụ na ndebanye aha.
Anund Farm mbụ ekwentị exchange bụ na ụlọ a, nke ruo afọ ụfọdụ nwekwara chọpụtara a azụmahịa.
The akụkọ ihe mere eme nke ekwentị mgbanwe i Anundgård
The mbụ ntuziaka ekwentị mgbanwe i Anundgård wuru na mbubreyo 1910s. The ebe bụ mgbe 50m n'ebe ọwụwa anyanwụ nke taa ekwentị exchange (dị 700m ọwụwa anyanwụ nke ụka). Stationsbeteckningen n'oge ahụ "Östbyn", Ọzọkwa ofu ebe ala i Anundgård. The "ntuziaka mgbanwe" e nyere n'ụzọ dị ukwuu site Holm onwe ozi, Maria "Maja" Hjerpe (keomumu Viklund, 1912).
gburugburu 1920 Mgbe telephony Holm bụ na-amalite amalite, ọ bụ, na ọ bụ Maja si nkuchi nna Pelle Haglund onye mere mgba ọkụ, ma ama na afọ 13, ọ bụ Maia onye nwere ka o weghara ihe na-agba ọsọ. O lekọtara ntuziaka gia mgbanwe Holm ruo mgbe mbụ akpaka ọdụ na ihe oge a ekwentị ngwaọrụ na Ịkpọ oku ada n'elu ọrụ nke Holm, na n'etiti 60.
Atụ nke mgbanwe ojii 40 st debanyere aha-ele anya na nke a oge. Yiri ka Manor, Anund mbụ gia anya.
Tupu ndị akpaaka na-arụ ọrụ ya mere na mgbe ị chọrọ na-akpọ n'ebe ọ bụla ka ị na mbụ na-amalite cranking na ekwentị na-ebuli ndị handset. Ebe ọ bụ na zara Maja "Anundgård" na ndị ọzọ na ọgwụgwụ na ahụ nwere ịjụ ike jikọọ na. Nwere ike ịbụ na ọ na-nwekwara ike-eme ịnụ mgbe ụfọdụ na-agba asịrị na obodo site na ọrụ a.
Foto t.v. hụrụ otu n'ime Maja si ọrụ nkwekọrịta site na afọ, "Nkwekọrịta banyere management nke mgbanwe ojii na oku na-aga ngwaọrụ ka ọha na eze na telegram njem" si 1935. E, ihe ndị ọzọ na ebe ga-emeghe söckendagar (weekdays) na 8-20. N'èzí ndị awa i nwere anya n'ihi na ndị ọzọ n'aka nke nkwurịta okwu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ga-esi jide onye. Ke Sunday, ọdụ e mechiri maka ụtụtụ ozi ke 10-13 na maka Sunday nri abalị na 16-18. Ọzọkwa, ihe oyiyi n'okpuru ị pụrụ ịhụ na remuneration maka ọrụ dị ka onye nduzi nke telekomunikashions ojii 40 SEK / afọ na ndebanye aha. Na dị ka "ekwentị" dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha na 1935 dị ka 15 st, nke ga-a ego ụgwọ ọnwa nke ụkọ 50 kr.
(Pịa na foto enlarge)
N'ihi na ndị na-enweghị a ekwentị ya n'ụlọ ka ọ na-aka na-eleta ndị ịmafe ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ fon. On ụzọ i nwere na-akwụ ụgwọ site na-ahapụ 15 penny na nwa egbe dị ka hụrụ na image n'okpuru. Otu picture na-ahụkwa a akwụkwọ na Sweden ojii dere dere afọ 1919. na peeji nke 120 anyị na-ahụ "Östbyn".
Maja biri na mbụ ụlọ ọrụ ekwentị ndụ. Ná ngwụsị nke nke 40 na narị afọ wuru a ọhụrụ ntuziaka switchboard 100m ọwụwa anyanwụ. Taa bụ nwa ya nwaanyị nke bi na ndị kasị ochie telekomunikashions ojii, mgbe nwa ya nwoke bi na nke abụọ-kasị ochie.
Anund Manor abụọ ịmafe center. Behind na window ka nri bụ ntuziaka gia, ụlọ nke fọdụrụ na ya, i nwere ike na-akpọ ma ọ bụrụ na i nwere gị onwe gị na ekwentị n'ụlọ
Ke ufọt ufọt 60s na-wuru Holm mbụ akpaka ekwentị exchange (The ụlọ adịkwaghị), a na n'etiti abụọ hotara na mbụ. Ná mmalite 80 e wuru na telekomunikashions ebe eji ruo taa. Ke ufọt ufọt / mbubreyo 90, ogologo oge tupu YouTube, Facebook na Google hụrụ ìhè, ọ bụ site na ekwentị ebe dị ka ọtụtụ Holmbor nwere mbụ ya na kọntaktị na Internet.
Ọtụtụ mgbe nwere na desktọpụ kọmputa a wuru "56 kbits-modem" nke n'aka nke na-jikọọ a ekwentị Jack. Na amara na-ahụ ekemende ekwentị mgbe ha nọ ọdụ ma na-eche na ise nkeji maka a Web page ike kwajuru! Ma eleghị anya, gafere gị na mbụ e-mail Anund Farm ịmafe center?
Nwute n'ihi Holm bi, otú dịghị mgbe ọdụ ka ike kwalite na ọtụtụ ihe ngwa ngwa ADSL technology Ulo oru na n'oge 00 si, mgbe ọ Telia ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọrụ na-ewere ya bara uru. n'oge mgbụsị akwụkwọ 2005 bụ a eriri si slide ka Anundgård akwụkwọ na mgbe ahụ bụ ndị na-jụrụ Anundgårdsbor ma ọ bụrụ na ha bụ ndị nwere mmasị na-isonyere, nke banyere 15 ezinụlọ mere. Mgbe afọ ụfọdụ gasịrị, ọbụna mobile 3G technology, nke pụtara na ọtụtụ ndị hapụrụ ha ochie ọsịsọ-njikọ Ịntanetị site na ekwentị Jack.
mgbe ọ fọrọ obere 40 afọ nke ije ozi ga Anund Farm na-adịbeghị anya na ekwentị ebe na-anọghịzi n'ọrụ
Ọ ga taa ọtụtụ afọ kemgbe onye ọ bụla ikpeazụ surfed na a "56 kbits modem" via ekwentị Jack, ebe ugbu a ọnọdụ bụ ka gburugburu 40 debanyere aha iji ekwentị Jack n'ihi na n'ụlọ telephony site Anundgård ojii.
mkpebi na December 2016: N'eziokwu enyemaka maka eriri ka Holm! Holmbygden.se
Holm Fiber Economic Association. Banye ebe a!
Gụọ ihe banyere mmechi / "n'ọdịnihu netwọk". Telia.se
4G-nwe-ruo Holmbygden! Holmbygden.se
Mgbanwe telekomunikashions- na brọdband netwọk, post & Telecom Agency
Telia ewepụ ofu telephony na Loviken 2012, Holmbygden.se